ပန်းကလေးများပွင့်တော့မည် ဖူးတံဝင့်လို့ချီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပန်းကလေးများပွင့်တော့မည် ဖူးတံဝင့်လို့ချီ
Posted by padonmar on May 27, 2013 in Creative Writing, Education | 30 comments
မနှစ်က ဧပြီ ၁ရက်နေ့မှာ ကျမရဲ့ ဇာတိမြို့လေးက ကလေးတွေနဲ့ အကျီင်္လေးတွေ ပေးရင်း စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေး စာမေးစာဖြေလေးတွေ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်း ပဒုမ္မာရဲ့ ချစ်စရာ့အရွယ် Cover Story post လေးကို မှတ်မိကြပါသေးလား။
နောင်နှစ်ထပ်သွားရင်တော့ ကလေးတွေ အခြေအနေ ဘယ်လိုနေပါ့မလဲလို့ ကျမ ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်တော့ မတ်လ 26 ရက်နေ့က မြို့လေးကို ပြန်ရင်း ကလေးတွေနဲ့ ထပ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
တပေါင်းပွဲတွေရှိတော့ တစ်ချို့ကလေးတွေလည်း ဘုရားပွဲတွေကို အလည်သွားနေတာဖြစ်လို့ ဒီတစ်ခါ လူနည်းပါတယ်။မနှစ်က ပါတဲ့ကလေးတွေရော၊မနှစ်က မပါတဲ့ကလေးတွေရော ရောက်လာကြပါတယ်။
မနှစ်က ထုံးစံအတိုင်း ကျမတို့လာပြီကြားတာနဲ့ ရောက်လာကြတဲ့ ကလေးတွေကို အတန်းစဉ်လိုက် တန်းစီခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
အတန်းကြီးဆုံးက ၆တန်း၊၇တန်းနဲ့ ၈တန်းကျောင်းသားတွေပါ။
သူတို့ကတော့ စာမရကြပါဘူး။အင်္ဂလိပ်စာမေးလည်းမရ ၊မြန်မာစာမေးလည်း ထစ်အထစ်အ၊
သိပ္ပံက နေကြတ်ခြင်းလကြတ်ခြင်းသင်ပြီးပြီဆိုလို့ မေးကြည့်တာ
အင်းအဲနဲ့ ခွေးအကြီး လှည်းကျိုးနင်းသလို ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။
၄တန်း ၊၅တန်းကလေးတွေ အလှည့်မှာ အတော် ဖြေနိုင်လာပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုတောင် self intro လုပ်တတ်ကြတယ်။
စောစောက အတန်းကြီးတွေ မဖြေနိုင်တဲ့ နေကြတ်လကြတ်ခြင်းဆိုတာတောင် သူတို့ ဖြေနိုင်ကြပါတယ်။
ကျမလည်း ၀မ်းသာအားရ အကျီင်္တွေဆုချရတော့တာပေါ့။
Self Intro လုပ်ရင်း ထစ်သွားလို့ နောက်က ထောက်ပေးတာ
၃တန်းကလေးတွေထဲမှာတော့ မနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဗျာရွတ်ပြသွားတဲ့ကလေး ပြန်ပါလာပါတယ်။
(ကိုရင် စည်သူကတောင် ဒီကလေး စစ်မှုထမ်းဖြစ်မယ်လို့ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာနဲ့ ဟောပေးခဲ့ပါတယ်)
ဒီကလေးကတော့ မြန်မာစာ၊အင်္ဂလိပ်စာ၊သင်္ချာ၊သိပ္ပံ ဘာမေးမေး ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက် သွက်သွက်လက်လက် ဖြေသွားပါတယ်။
တစ်မျိုးဖြေနိုင်လိုက် အကျီင်္ တစ်ထည်ဆုချလိုက်နဲ့ ကလေးလက်ထဲ အထည်တွေ အများကြီးရသွားပါတယ်။
အကျီင်္တွေက ကလေးဝတ်၊လူကြီးဝတ် အစုံဆိုတော့ သူ့ အဖေအမေတွေတွက်ပါရသွားတာပေါ့။
ဒီနှစ် ၃တန်းမှာ ပထမဆု ရတယ်တဲ့
သားက တယ်တော်ပါလား ဆိုတော့ သူက ဘာမှမပြောပေမယ့် ဘေးက ကလေးတွေကပဲ ဒီကောင် ဒီနှစ် ၃တန်းမှာ ပထမ ရတယ်လို့ သတင်းပေးကြပါတယ်။
ဒီကလေး မနှစ်တုံး က ကျောင်းမှာ ဆုရတဲ့ထဲ မပါပါဘူး။ အခုပထမတောင်ရတယ်ဆိုတော့
ကျမတို့ မနှစ်က အမေးအဖြေလေးတွေကများ သူကလေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်မြင့်ဖို့ ထောက်ကူပေးလိုက်နိုင်သလားလို့ တွေးပြီးတော်တော်ကြည်နူးမိပါတယ်။
(ကလေးလေးက ဆင်းရဲပါတယ်။သူဝတ်ထားတာလေးဆို တော်တော်နွမ်းပါတယ်၊
ကျမ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ သူကလေးတွက် စာရေးကိရိယာတွေနဲ့ ဖတ်ချင်စရာ အင်္ဂလိပ်စာပျော်စရာ၊ခလေးတို့ချစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၊နဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းစာအုပ်တွေ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်)
အခြား ၃တန်း ၂တန်းကလေးတွေလည်း အရင်နှစ်ကထက်စာရင် သွက်လက်လာပြီး မေးရဲဖြေရဲပြောရဲလာကြပါတယ်။
(ဒီရပ်ကွက်လေးရဲ့ မူလတန်းကျောင်းမှာ ဆရာဆရာမတွေ စာကောင်းကောင်းသင်လာတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)
မနှစ်ကဆို စာမေးမှာလည်းကြောက၊် ကျောင်းစာဆိုတာ စာမေးပွဲပြီးရင်မေ့ပစ်လိုက်ရမှာလို ဘာမှခေါင်းထဲမကျန်ကြတော့ပါဘူး။
ဒီနှစ်တော့ အလီပေါင်းတွေမေးရင်လည်း သွက်လက်နေကြပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်စာလည်း အသံထွက်သိပ်အကောင်းကြီး မဟုတ်ပေမယ့် စာထဲသင်ရသမျှ မှတ်မိနေကြပါတယ်။
လောကနီတိ၊ ၃၈ဖြာမင်္ဂလာ၊ဆိုတာတွေကို အဓိပ္ပါယ် အတိအကျကြီး မဟုတ်တောင် ရွတ်လည်းရွတ် သိလည်းသိလာကြပါတယ်။
ငါးပါးသီလကို အရွတ်သာမက အဓိပ္ပါယ်ပါသိကြပါတယ်။
မနှစ်ကဆို အဒိန္နာဒါနာ=၊သူတစ်ပါးအသက်သတ်ခြင်းမှရှောင်တာ ဆိုတာမျိုး အလွဲ ဖြေကြပါတယ်။
၁တန်း၊၂တန်း၊သူငယ်တန်းတွေလည်း အဲဒီလိုပဲ ကိုယ်ရတဲ့စာတွေ အားကြိုးမာန်တက်ရွတ်ပြကြပါတယ်။
ပါးစပ်မှာ ဆီကွက်နဲ့ သမီးကလည်း အလီ ဆိုမယ်တဲ့
သမီးက ပင်ဝါးရုံကဗျာ ရွတ်မယ်တဲ့။
၁တန်းကျောင်းသားကြီးက ဟိုဖက်ကမ်းက မီးထိန်ထိန် ဒီဖက်ကမ်းကမီးထိန်ထိန် ဆီမီးထိန်ထိန်ထွန်းပါတဲ့ မနှင်းတို့အိမ် တဲ့။
လူမိုက်ဆိုရင် ရှောင်သွေလွှဲလို့ မမှီဝဲနဲ့ ကင်းအောင်နေတဲ့
ကျောင်းနေတဲ့ ကလေး အားလုံးစာဖြေပြီးလို့ အကျီင်္တွေကလည်း ပိုနေသေးတာနဲ့ မေးခွန်းတွေမေးမယ်။ ဖြေနိုင်တဲ့သူကို အကျီင်္ဆုချမယ်ဆိုတော့ အားတက်သရော ၀ိုင်းဖြေကြပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး ဘယ်သူလဲဆိုတော့ ကလေးတွေသိကြပါတယ်။ သူ့အမေ ဘယ်သူလဲဆိုတော့လဲ ဖြေနိုင်ကြပါတယ်။(ဟိုမော်ဒယ်တွေထက်သာတယ်နော်)
ကလေးတွေ မသိတာတစ်ခုက နေ့ကြီးရက်ကြီးတွေ ကျောင်းမှာမသင်လို့များလား သူတို့ မသိကြပါဘူး။
ကလေးတွေကို တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး တွက် အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်း လက်ဆေးသလားမေးတော့ ဆေးကြောင်း လက်ဝိုင်းထောင်ပြကြပါတယ်။
အမှိုက်တွေ ဘယ်လိုပစ်သလဲဆိုတော့ မြစ်ထဲကို ပစ်ကြပါတယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ မြစ်ထဲ ချောင်းထဲ အမှိုက်ပစ်ရင် ဘယ်လို အန္တရာယ်ရှိကြောင်း နည်းနည်း ပြောပြပြီး နောင်ဆို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းမနေတဲ့ ကလေးတွေကိုတော့ သနားပေမယ့် လုံးဝမပေးပါဘူး။
စာသင်ချင်စိတ်၊စာကြိုးစားချင်စိတ်ဖြစ်အောင် ကျောင်းနေတဲ့သူ၊ သင်တဲ့စာကို တကယ် တတ်တဲ့သူတွေကိုပဲ ဆုချခဲ့ပါတယ်။
ကလေးတွေက အရင်လို ကြားဖြတ်တိုးတာ၊ ၂ခါ ၃ခါ မရသေးဟန်ဆောင်ယူတာမရှိတော့ပါဘူး။
စာဖြေနိုင်ရင် ဆုရမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လာကြပါတယ်။
ဆရာမမေးပါအုံး၊မေးပါအုံးနဲ့ ၀ိုင်းပြောနေကြလို့ မနည်း ဖြတ်ပြီးပြန်လာရပါတယ်။
နောက်နှစ်သွားရင်တော့ အလွယ်တကူရှိတဲ့ အကျီတွေသာမက ကလေးတွေ ပိုနှစ်သက်မယ့် ကစားစရာ ဆန်းဆန်း ၊မှတ်သားစရာစာအုပ် ၊စာရေးကိရိယာလှလှပပ လေးတွေ ၀ယ်ပြီး ဆုအဖြစ်ပေးအုံးမယ်လို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ကျတော့ သချိင်္ုင်းမှာ အဖေအမေအဖိုးအဖွားတွေရဲ့ အုတ်ဂူကို သွားကန်တော့ရင်းနဲ့ သုသာန်နားမှာ နေတဲ့ ကလေးတွေကို မုန့်ဝေရင်း ဒီလိုပဲ စာမေး ဗဟုသုတမေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သြကာသဆိုပြပြီး `ဘာရမလဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားကွ ´ပါတဲ့
ကျမတို့ ရပ်ကွက်လေးက အတန်းတူကလေးတွေလောက် ဉာဏ်ရည်မရှိသေးတဲ့အပြင် မေးရဖြေရမှာ
သူတို့ စာတွေ မမှတ်မိ ကြ တော့ ဖြေနိုင်မယ်ထင်တဲ့ ဘုရားရှိခိုးမေးကြည့်ပါတယ်။အနားမှာ သုသာန်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိလို့ပါ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းသားကွ ဆိုတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ပဲ ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ ရွတ်သွားပါတယ်။
သူတောင်မှ ပါဏာတိပါတာဆိုတာ ဘာလဲ မသိပါဘူး။ရွတ်ရုံပဲတတ်တယ်ဆိုပါတော့။
ဒီလို ယှဉ်ကြည့်တော့မှ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ် ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းလေးမလုပ်ပေးခင် ကျမရပ်ကွက်လေးက ကလေးတွေလည်း သုသာန်နားက ကလေးတွေလို မှန်တာကို မပြောရဲ မဆိုရဲ၊ ဘာမဆို လုယက်ယူချင် ၊ကျောင်းစာကို အလေးမထားဆိုတဲ့ စရိုက်ကလေးတွေရှိခဲ့တာပဲ။
၃နှစ်လောက်ကာလတွင်းမှာ တစ်နှစ်မှ တစ်ခါလေး ဘာမဟုတ်တဲ့ အကျီင်္လေးတွေ ပေးပြီး မဖြစ်စလောက်သင်ရုံနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ တိုးတက်လာရင်
ဒီပန်းကလေးတွေကို တကယ် နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေက စနစ်တကျ အချိန်ပေးပြုစုပျိုးထောင်ရင် ဘယ်လောက်တောင် လှတဲ့ ပန်းခင်းကြီး ဖြစ်လာမလဲလို့ တွေးမိပါတယ်။
သူငယ်ချင်းမေအေးဦးရဲ့ စကားလေး ယူသုံးပါရစေ။
ကျမကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေကတော့ မအောင်ချင်နေပါစေ၊ငွေကိုရေလိုမလောင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့။
အဲဒီလို ငွေရေလောင်းနေကြတဲ့ မိဘတွေကြောင့်လည်း ပညာရေး အဆင့် နိမ့်နိမ့်လာရတာပါပါတယ်။
ရေ(ငွေ)မလောင်းရင် ကိုယ့်ခလေး မျက်နှာငယ်မှာ
အခု ဘာကြေးမှ မကောက်ရဘူး၊ ပုံနှိပ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းပေးတယ်ဆိုပြီး
လက်တွေ့မှာ မရကြပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ကြရပါ့မလဲ။
တိုင်းပြည်အတွက် အုတ်တချပ်သဲတပွင့် ဆိုရရင်လဲ
တကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ မပဒုမ္မာကို ချီးကျူးအားကျပါတယ်ဗျို့……
အုပ်ချပ်အကြီးကြီးတောင် မဟုတ်။ အုပ်ချပ်တွေ အများကြီးဆက်ထားတဲ့ နံရံကြီး ထက်တောင် ပိုပါတယ်။
လန်း သော ပန်းတိုင်းလည်းး
မွှေးစေချင် ပါတယ် ဗျာာာ
ဗရာကြော်ပါ အာတီဒုံရေ …
နောင်နှစ်များမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ ကူဖို့လှူဖို့ ဆန္ဒများစွာဖြစ်မိပါကြောင်း..
နောက်ခါများမှာ ကျနော့ကို လက်တို့ပါဗျ။
ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း နယ်ကျောင်းမှာပဲ စာသင်ခဲ့ရတဲ့ သူမို့။
သုံးတန်းကနေ ငါးတန်းအထိ နယ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲက စာသင်ကျောင်းလေးကို ဖိနပ်လေးချွတ်ကိုင်ပြီး သွားခဲ့ရတာပါ။
ခု ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး အတိတ်ကို လွမ်းမိပါသေးတယ်။
အန်တီက နှစ်တိုင်း မတ်လ 27 နဲ့ ဧပြီ 1 ရက် ကြား ပိတ်ရက် မှာ မြို့ပြန်ပါတယ်။
ကိုယ်ကြီးပြင်းရတဲ့ နေရာဆိုတော့ ကိုယ့်မှာပဲ အဓိက တာဝန်ရှိတယ်ယူဆလို့ အလှူမခံပဲ ကိုယ်တစ်နိုင်ပဲ လှူခဲ့တာပါ။
နောက်နှစ်ဆို ရွာသူားတွေဆီက အကြံဉာဏ်လည်း လိုချင်တယ်။
ကလေးလေးတွေကို အကျီထက်ပိုပြီး သူတို့ သဘောကျမယ့် (အခြားအပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာ ငါတို့ ဆုရတာလို့ ကြွားလို့ရမယ့်)
ကစားစရာဆန်းဆန်းလေးတွေ၊ဖတ်စရာ စာအုပ်လှလှလေးတွေ၊စာရေးကိရိယာ ဆန်းဆန်းလေးတွေ ပေးချင်ပါတယ်။
မောင်ဂီတို့ မယ်ဆွိတို့နဲ့ လူငယ်တွေဆီက အိုင်ဒီယာရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကြည်နူးဖို့ ကောင်းလိုက်တာနော် …
အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲ အလုပ်နဲ့သက်သေပြနိုင်ခဲ့တာကို ဂုဏ်ယူပါတယ် .. အားလဲကျတယ် ..
“တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ရမည်´´
လက်တွေ့မှာလည်း တကယ်ထိရောက်ပါတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါဘဲလို့။
စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားတက်သရောလုပ်ဆောင်မှု့ကိုအားကျပါတယ်အန်တီကြာရေ။ တကယ့်ကိုကလေးတွေ စိတ်ဓါတ်တိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ မနှစ်ကပိုစ့်လဲဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အခုပြန်မှတ်မိသွားပြီ။ အားကျပါတယ်။
ကလေးလေးတွေဆိုတာ အနာဂတ်ရဲ့ အညွန့်အဖူးလေးတွေဆိုတော့ ကျမတို့ရွာသူားတွေ ကြုံကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ မြေတောင်မြှောက်တဲ့အလုပ် လုပ်ပေးကြပါစို့။
လုပ်နိုင်ပါစေ ထာဝစဉ်ဗျား…… :hee:
လက်တန်းကဗျာလေးကကောင်းလိုက်တာ၊(ကဗျာပြခန်းလည်းဖွင့်လိုက်တော့မှ ဒို့ဦးကြီးမိုက်ရဲ့ ကဗျာစွမ်းတွေ တွေ့ရတော့တယ်)
တကယ်ဖိတ်ရမှာလား၊လမ်းကြမးတယ်နော် မြို့ပြန်ရင် ၄- ၅နာရီလောက်မောင်းရတယ်။
ရွာသူားတွေ လိုက်ချင်ရင် တကယ်စီစဉ်လိုက်မှာနော်။
အဟင့်… မရက်စက်ကြပါနဲ့ ခင်ဗျာ… ဒီဘွမှာ ပျော်ပျော်ကြီး နေပါရစေဦး…
အော် ဦးကျောက်ခဲ ဆိုတော့ ကျောက်ခဲသီချင်းဆိုတဲ့ ဟိုမင်းသားကြီးရဲ့ သဇင် သီချင်းသတိရမိတယ်။
ပဒုမ္မာရဲ့ ပုံပမာ မဟုတ်တဲ့ လက်တွေ့အသီးအပွင့်များးးးးးးးးးးး :hee:
ဖြူစင်တဲ့ ပန်းကလေးတွေ ပွင့်ဝေစေတဲ့ စိတ်ထားမြတ်သူရဲ့ ပျိုးထောင်မှုပဲနော် ..
လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ် အန်တီ …. :hee:
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ တုန်းကပေါ့
မန်းတလေး ချမ်းမြသုခ နာရေးကူညီမှုအသင်း က အမှုဆောင် တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ တော့
အန်တီမာ တို့ ဘက်ပဲ ဗျ ။ ဟိုတစ်ခါ ဆေးရုံကို သွားလှူတဲ့ဘက် လေ
အဲ့နားက ရွာက စာသင်ကျောင်းမှာ ကျောင်းသူားတွေ အတွက် ထိုင်ခုံနဲ့ စာတင်ခုံတွေ လိုနေလို့သွားလှူကြမှာတဲ့
ဒါနဲ့၊ တစ်ဆက်စာ ၃သောင်း၅ထောင်ကျပ် လှူဖြစ်ခဲ့တယ် ။
သာဓု သာဓု သာဓုပါ မောင်ပေရေ။
မြန်ပြည်တလွှား လိုအပ်ချက်တွေ အများသား။
ဒီနှစ်ကျောင်းအပ်တဲ့ မိဘတွေဆီက ကြားရတာ ၀မ်းသာစရာသတင်းမို့ ပြန်မျှဝေလိုက်အုံးမယ်။
မူလတန်းကျောင်းသားတွေ အကုန်လုံး (အစိုးရကျောင်းတွေမှာ) ကို ကျောင်းအပ်တာ ဘာမှပေးစရာမလိုတဲ့အပြင် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီကို စာအုပ်၊ ဘောပင် စသဖြင့်ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေ ဝေငှတဲ့အပြင် ခဲတံစတဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ဖို့ ငွေ ၂၀၀၀ကျပ်ပါ ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘက ကျောင်းတွေပါ မပါ မသိရပါ။
ဟင်းစားပေးတာထက် ကွန်ချက်ပြတာက ပိုအကျိုးများပေမယ့်…
လောလောဆယ် စားဖို့သောက်ဖို့အတွက် ဟင်းစားအရင်ပေးပြီး
ရေရှည်စားသောက်နေထိုင်ဖို့အတွက် ကွန်ချက်ပြမယ်ဆိုရင်….. :hee:
ဂျပန်နိုင်ငံက လှူဒါန်းတာလို့ သိရပါတယ်။
၀မ်းသာပီတိ ကြည်​နူးမိပါတယ်​ အန်​တီ Padonmar ခင်​ဗျာ။နှစ်​စဉ်​နှစ်​တိုင်း ပိုမိုလှူတန်းနိုင်​ဖို့အတွက်​
စိတ်​ချမ်းသာ ကိုယ်​ကျန်းမာပြီ စီးပွားဥစ္စာ ဒီ​ရေအလာ တိုးတက်​​အောင်​ပြုလုပ်​နိုင်​ပါ​စေ။
လက်ပိုက်ထားတဲ့ ဟိုကလေးပုံကို ကြည့်ပြီး
တော်တော် သဘောကျမိသွားတယ် …
သူ့ပုံစံက ငါကွ လို့ ပြောနေသလို …
ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ ငယ်ငယ်က ရွာကျောင်းမှာ သံပြိုင်ဟစ်ခဲ့တာကို ပြေးပြီး သတိရမိလို့ ပြုံးမိပါသေးတယ် ….
“ပန်းကလေးများ ပွင့်တော့မည်၊ ဖူးတံဝင့်လို့ချီ၊ နေခြည်မှာ ရွှေရည်လောင်း၊ ငါတို့ စာသင်ကျောင်း၊ ဟောင်းလောင်း ….”
ဟုတ်ပါ့၊လက်ပိုက်ထားတဲ့ ချာတိတ်က စာမေးတာ မဖြေနိုင်တဲ့သူလေ။
အ၀တ်တွေက အန်တီကတော့ ပေးရတာ မျှအောင် အသစ်ပေးတာပါ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ရော သူတို့မိဘတွေရော တော်တော်ဆင်းရဲကြတော့ အဟောင်းတွေ လှူလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြတာပဲ။
(တခါတလေ ဆွေမျိုးတွေဆီက အဟောင်းတွေတောင်းပြီး စက်ရုံက ကလေးမလေးတွေ၊ပဲရွေးတဲ့ အလုပ်သမလေးတွေကို ဝေပေးရင် သူတို့ သိပ်ပျော်ကြတာပဲ)
သူတို့ အနေနဲ့ ၀ယ်မ၀တ်နိုင်၊၀ယ်ဝတ်နိုင်တောင် ဖောဖောသီသီ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။
ကိုယ့်အဟောင်းက သူတို့တွက် သစ်တောင်နေပါတယ်။
တကယ် လိုအပ်တဲ့နေရာကို ရောက်သွားတာ ၀မ်းသာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကတောင် ကိုထွန်းဝင်းလတ် ပို့စ်တင်လာတော့မှ ကျောင်းဖွင့်ခါနီး စာရေးကိရိယာတွေ လိုမှာပဲ ဆိုပြီး အဲဒီကလေးတွေတွက် ဗလာစာအုပ်တစ်ဒါဇင်၊ခဲတံ၊ပေတံ၊ဘောပင်၊ခဲဖျက် တွေ ၀ယ်ပြီးပေးခိုင်းလိုက်ရတယ်။(ဝေးဝေးက ကလေးတွေတွက် လှူသလို နီးနီးလေးကိုကျတော့ မေ့နေတတ်တယ်လေ၊မိုချိုတောင်ရေးသေးတယ်)
လှူဖို့ သတိရစေတဲ့ ကိုထွန်းဝင်းလတ်နဲ့ ကိုထူးဆန်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
.ကျမတို့.မြို့က လူငယ်လေးတွေ ဦးဆောင်ပြီး အဲသလိုပဲ ဆင်းရဲတဲ့ ကျောင်းက ကလေးတွေတွက် ကလေးထီး လေးတွေ လှူအုံးမယ်တဲ့။(ထီးတစ်လက် ၂၀၀၀ တဲ့)
ထီးမရှိတဲ့ ကလေးတွေမှာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကြီးကြီးတွေ ဆောင်းပြီး ကျောင်းတက်ရတယ်တဲ့။
ဒါကြောင့် ဒီနှစ် အစိုးရကလည်း စာရေးကိရိယာထောက်ပံ့မယ်ဆိုတော့ လိုနေမယ့် ထီးလှူကြမယ်လို့ တိုင်ပင်ထားကြပါတယ်။
ရွာသူားတွေကို ကုသိုလ်အမျှပေးတာပါ။(နီးစပ်ရာတွေမှာ လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်နိုင်ကြပါစေ)
သူများတွေ ပြောတဲ့အတိုင်း ဓာတ်ပုံတွေ ပျောက်ကုန်ပါရော့လား။